घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार » संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज » F18 लड़ाकू जेट विमानहरू आकाशमा स्टल गर्दछन्
उड्डयन • संस्कृति • समाचार • पर्यटन • पर्यटन कुराकानी • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा रहस्य • अहिले प्रचलनमा • संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज • विभिन्न समाचार
F18 लड़ाकू जेट
अझै कुनै फ्लाई सूचीमा F18 लडाकू जेटहरू छन् जुन आकाशमा अड्किएको जस्तो देखिन्छ। कहाँबाट? कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ?
सुरागहरू छन् - पहिलो अस्तित्वमा तिनीहरू एक अनिर्दिष्ट समुद्रको बीचमा अज्ञात स्थानबाट आएका छन्।
जेटहरू अब संयुक्त राज्यको विमानवाहक जहाजमा डेक र स्टेशनरी मुनि छन्।
F-18 लडाईहरूलाई कहिले कर्तव्यका लागि बोलाइन्छ र आकाशमा लगिन्छ र कुन उद्देश्यका लागि? भन्न गाह्रो छ, किनकि लक्ष्य मिशन मिति परिवर्तन हुन्छ।
त्यसोभए हामी के कुरा गर्दैछौं? के एफ १18 लडाकू विमानहरू सबै जना पर्खिरहेका छन्?
उनीहरूले आफ्नो फिल्मको शुरुवात "शीर्ष गन: मावरिक, "चलचित्र, अवश्य।
शीर्ष गनलाई सिनेमा घरहरूमा रिलीज भएको 35 XNUMX बर्ष भयो। हो। तीस पाँच बर्ष पिट "माभेरिक" मिशेल र निक "गुज" ब्रैडशोले आवश्यकतालाई, वेगको आवश्यकता महसुस गरे।
पहिले चलचित्र डिसेम्बर २,, २०२० मा सिनेमाघरहरूमा खोल्नु पर्ने थियो, तर त्यो ... अर्को के कारणले ढिला भयो?… COVID-१।। चलचित्र जुलाई २ मा यस हप्ताको अन्तमा आउँनु पर्ने थियो। तर त्यो मिति एक नोभेम्बर १,, २०२१ को सट्टामा छोडिएको थियो।
प्यारामाउन्ट चित्रहरूको छवि शिष्टाचार
तपाईं देख्नुहुन्छ, मेभरिक स्टार टम क्रूजसँग अर्को फिल्मको सीक्वल छ जुन यस वर्षको गिरावटमा बाहिर आउने थियो - "मिशन: इम्पॉसिबल 7.।" तर त्यो फिल्म अब मे २ 27, २०२० मा आउनेछ। प्रत्येक फिल्मको बक्स अफिसको समय र ईतिहासमा आ-आफ्नै क्षण हुनै पर्छ।
तर शीर्ष गन र मिशन इम्पॉसिबल केवल चलचित्रहरू होइनन् जुन COVID-१ to को कारणले फिल्म अवलोकनको फेरबदल डेकमा चलेका छन्। यो लगभग दिइएको छ किनकि कोरोनाभाइरसले यसको कुरूप टाउकोलाई कल्पना गर्न भन्दा धेरै तरिकामा पालेको छ।
मिसन: ईम्पेसिबल7को निर्माणको लागि निर्धारित समयमा, टम क्रूज फिल्म चालक दलका सदस्यहरूसँग एक COVID सुरक्षा रेन्टेनमा गए जसको मनपर्दो गत बर्षको डिसेम्बरमा सम्पूर्ण सोशल मिडियामा फैलिएको थियो।